J: March 2008
အင်္ဂလန်မင်းသားလေး ဟယ်ရီက ဦးထုပ်ကို ၃ခါ (၁လကြား) ဆောင်းမိသောကြောင့် သတင်းစာများက အတင်းပြောကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် င်္အကျီများများ မထပ်အောင် ၀ယ်ဝတ်ရခြင်းကြောင့် ဆိုင်ရှင်များက သတင်းထောက်များအား လဒ်ထိုးလေသလားဟု ထင်မိပါသည်။
ယုယမြတ်နိုးရဲ့ ဒီအချိန်ဆို ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို ဗားရှင်းပြောင်းထားပါတယ် မူရင်းကတော့ ဒီမှာပါ
လေပြေညှင်းနဲ့အလှထူးတယ်
မွှေးရနံ့ ကြိုင်လို့ ထုံသင်းတယ်
တာရေဖျန်းလို့ဧမြတယ်
ကိုယ့်မျက်ခြယ်တွက် ထွေးဖို့ ကွယ်
ကိုယ်လေ အတွေးမှာ လွှင့်မျောတယ်...
ကိုယ်လေ တယောက်ထဲ အဖော်ကွဲ....
မွေးမြေနဲ့ ဝေး လွမ်းဆကဲ....
ဘလော့ကာ မောင်နှမများသို့ 
ဘလော့ကာ လောကမှာ ခေတ္တခဏ ခွဲခွာချိန်တွင် တချို့ သော နေရာများတွင် ပို့ စ်များရေးသားဖြစ်ပါက ကြိုတင်အသိပေးပါမည်။
၃၀ မတ်လ ၂၀၀၈ ၆နာရီ၄၆မိနစ် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်သုံည
ယနေ့ ဗျာ သတင်းစာထဲဖတ်ကြည့်မှ နံမည်ကြီးဖြစ်ဖို့ အတော် ကြိုးစားခဲ့ရသလို နံမည်ကြီးလာလို့ တွေ့ ရတဲ့ အခက်အခဲတွေလည်း တပုံကြီးဖတ်ရပါတယ်။
နံမည်ကြီးလာရင် နံမည်တက်နေရင် သူရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေကို လိုက်စုံစမ်းတယ်။ သတင်းပေးရင် ငွေဘယ်လောက် ပေးမယ်ဆိုပြီးဝယ်တယ်။ သတင်းထဲထဲ့ပြီး သတင်းစာရောင်းတာပေ့ါ၊ သူ့ ရဲ့ အတွယ်အတာတွေ သမိုင်းရာဇ၀င်တွေပါလိုက်စုံစမ်းတယ်။ ရေသောက် အီးပေါက်တာတောင် သတင်းဖြစ်ရတော့ ကျန်တာ ထဲ့မပြောပါနဲ့တော့။
အခုလဲ နံမည်ကြီးတွေ င်္အကျီဝတ်တာ တထည်ကို တခါဘဲ ၀တ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ သူငယ်ချင်းင်္အကျီဝတ်ရင် သို့ မဟုတ် သူ့ သူငယ်ချင်းကို င်္အကျီငှားရင်လည်း သူငယ်ချင်းဓါတ်ပုံနဲ့သူ့ ဓါတ်ပုံတွဲပြီး သတင်းတပုဒ် ထွက်လာတယ်။ သူ့ င်္အကျီသူဝတ်တာတောင် ဘယ်နစ်က ဘယ်နေရာမှာဝတ်တယ်။ ဘယ်လက ၀တ်ထားတယ်။ ဒီအတိုင်းသာဆို င်္အကျီတထည်ဝတ်ပြီးမီးရှို့ ပစ်ရမဲ့ အတိုင်းဘဲ။ မလွယ်ကြော သတင်းထောက်တွေ.. အတော် မေတ္တာပို့ ဖို့ သင့်တဲ့ လူတွေဗျ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သတင်းထောက်တွေနဲ့ ရောပြီး လူသတ်သမားအန္တရယ်ကြောက်လို့သက်တော်စောင့်တွေ ငှားနေရတာကိုး။ နံမည်ကြီးရင် ငွေကြီးကြီးဝင်သလို ငွေကြီးကြီးထွက်တယ်ဗျိုး။
အားရှားပါး ... င်္အကျီတထည်ကို မစုတ်မချင်းဝတ်တဲ့ ဂျေတို့ တော့ ဒီနေရာမှာ ဂေါက် ဖြစ်သွားတာဘဲ ဒါ့ကြောင့် နံမည်ကြီး ဘလော့ဂါစာရင်းထဲမ၀င်ဘူး။ တော်ပါသေးရဲ့ ... .... ... ဟူး .... ....
စာရေးသူအတွက် ဘလော့ကာလောကကို ခေတ္တခဏ ခွဲခွာဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ စီပုံးကိုလည်း ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ စာရေးဆက်သွယ် လိုပါက joyful4all2008@gmail.com ကို ဆက်သွယ် စေလိုပါတယ်။
လာရောက်အားပေးကြသော ဘလောကာ မောင်နှမ များကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ တနေ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ ခုများတော့ ခြေစွမ်းပြတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ နှတ်ဆက်နိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းမဟုတ်လို့နှတ်မဆက်ပါရစေနဲ့ ။
တနေ့ နေ့ မှာ.... ပြန်လာခဲ့မည်... အကျွန်ုပ်၏ လက်စွမ်းပြပြီးပြီ ဖြစ်သဖြင့် ခြေစွမ်းပြ ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
လိပ်တက် ယုန်တက် လီမီတက် ကားရှိုးရွန်း
၂၁ မတ်လ ၂၀၀၈ ၁၃နာရီ၄၃မိနစ် ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် သုံည
မှတ်ချက်။ ။စာကြေခြင်း(စာအုပ်ပေါ်မှောက်အိပ်ခြင်း) စာပိခြင်း(စာအုပ်ပေါ်ဖိထားခြင်း) ဦးဏှောက်စားခြင်း(စာအုပ်က မျက်နာပေါ်တွင် နှိပ်စက်နေခြင်း)
at 6:36 AM 12 comments
ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ
မငိုပါနဲ့ချီရွန်ရာ
အဟဲ စိတ်မရှိပါနဲ့ ကိုချီရွန်ရာ အလုပ်မသွားခင် ဂမန်းဂတမ်းရေးရလို့ ပါ။ နောက်တော့ လိမ်းဖို့ဆေးရှာပြီးပေးပါမယ်။ အဒုတော့ မပြေးခင် အကြွေးတင်တာ ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ အကြွေးကြေပြီနော်.. ပြေးပြီဗျ...တနေ့နေ့တော့ ပြန်လာခဲ့ပါမည်။
ကိုဂျေ ကတော့ ဆရာပဲဗျာ။ လေးစားပါတယ်။ ကဗျာလဲ ကောင်းတယ်။ ခေါက်ဆွဲသုပ်လဲ သိပ်ကောင်း။ နောက်ထပ် ရေးဦးဗျာ။ ဟိဟိ နောက်တခါကျရင် ကောက်ညှင်းပေါင်း ရေးဗျာ။ စားတော်ပဲများများ နှမ်းထောင်းလေးပါ ဖြူးပေးဗျ။ ရေးပေးနော်။ ငှဲငှဲ
ကိုဂျေ ကောက်ညင်းပေါင်းပါဆိုဗျာ။ အဲဒါ မရေးမချင်း လာအော်မယ်ဗျ။ ဟီးဟီး
at 12:52 AM5comments
(မာမီ့လက်ရာ ခေါက်ဆွဲသုပ်ကို လွမ်းခြင်း တမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ရင်တွင်းဖြစ် ခံစားချက် စစ်စစ်
သွယ်လျလျ ၀ါရည်ညက်နဲ့ 
ဖြူသွယ်လျ ဘော်ကြာဆန်နွဲ့ 
ခေါက်ခက်တော် ဆွဲဟန်လုပ်နိုင်ဘု ပလ္လင်ထက်မှာ ပျော်။
ရွှေစွန်ရယ် အချိုကဲလို့ 
ပဲပေးတယ် အမှုဟန်ပိုနွဲ့ 
ဖွေးဖွေးဖုံ တင်အောင် မှုန်းပေတော့ စိတ်ကြိုက် နေနော်။
ငြုတ်ကိုဘယ် ရှုပ်တယ်ပြောပါနဲ့စပ်စရာ့ ဆွေတော်။
ငံရည်စွာ ထွေးချင့်ပေးမယ် မမေ့ရက် စေသော်။
ဟင်းလို့ ရယ် ပြောချင်ဘု
မွှေးလှတဲ့ ဘေးအရံကြဲ ရည်က လိုက်ဖက် ပါသသော်။
ရင်တွင်းဝယ် လိုက်မမှီဘူးထင်ပါ့ ခေါက်ဆွဲသုပ်နော်။
လာလည်ကြကုန်သော ဘလော့ကာ ဘော်ဒါအပေါင်းတို့ အား ရင်တွင်းဖြစ် အရသာ အပြည့်ရှိသော ခံစားရသော ကြာဆန်အရော ခေါက်ဆွဲသုပ် နဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်။
ဂေါ်ဖီ၊ သခွားသီး၊ ကြက်သွန်၊ ပဲမှုန့် ၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ မန်ကျည်းရည်၊ ငြုတ်သီးမှုန့် နှင့် သုပ်ထားသော လက်သုပ်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ကိုက်ခါ ငရုပ်ကောင်း ကြက်သွန်ဖြူ ဟင်းခါးနှင့် သုံးဆောင် သွားကြပါ။
ဘော်ဒါကြီး ခင်ဦးမေ စိတ်ကြိုက်ခံစားနိုင်ပါစေ..
Label: Food, poem
ဘော်ဒါကြီး khinoomay က (တယ်ဟုတ်ပါလား..ရင်တွင်းဖြစ်ထင်တယ်) နှင့်
ဘော်ဒါကြီး ကိုင ရဲ့ (ကောင်လေးတောင် ခံစားတတ် လာပြီဟ)ဟု မှတ်ချက်ရေးသွားခြင်းကြောင့် အမှန်တကယ် ရင်တွင်းခံစားမိရသော ဖရဲသီးကို ဖွဲ့ ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မျှော်ကြည့်မိတယ် ချစ်သူဆီသို့ ၊
မျှော်တာ ကြာပေ့ါ ချစ်သူရေ။
နားစွင့်မိတယ် ချစ်သူဆီသို့ ၊
လေဝှေ့ သံကြား ရွက်ကြွေကြားမှ၊
လှမ်းကြည့် နွမ်းမိ ချစ်သူရေ။
မင်းသာ တယောက်ထဲ ချစ်သူရေ၊
လွတ်သွားမှာစိုး ဝေးမှာစိုးလို့ ၊
တင်းကြပ်ပွေ့ ထား အငွေ့ လေးလား၊
ထားခဲ့ပါနဲ့တွဲလက်ဖြုတ်နဲ့ ၊
နှတ်သံတိတ်လို့မမြင်စေသား၊
မင်းအရှေ့ နေရင် (ကိုယ်)အနောက်လှမ်းမယ်၊
မင်းတွက်အချစ်နဲ့ဘ၀ပျက်ခဲ့ ၊
နှတ်ချိုသံလား ကြင်နာလားလို့ ၊
ယုံမှားမိသူ ကံဆိုးသူမို့ ၊
ရေဆုံး မိုးမြေ ဘ၀ကွယ်စေ၊
ကမ္ဘာတဘက်ခြမ်း က ချစ်သူရေ။
ကျနော် ၄တန်းမှာ သတင်းစာစဖတ်ပါတယ်၊ အကို ဆရာဝန် တဦးက တိုက်တွန်းလို့ ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းတွေ စာမျက်နှာတိုင်း၊ စာတလုံး မကျန် ဖတ်ပါတယ်။ ၄တန်းကျောင်းပိတ် တော့ တိုင်းရင်းမေအဟောင်းထဲမှာ ကလောင်သစ် ကဗျာနှင့်အယ်ဒီတာ့အဖြေ ကိုဖတ်ရပါတယ်။ အယ်ဒီတာက ကာရန်ရှိတဲ့ ကဗျာကိုသာရွေးပြီး၊ ကာရန်မရှိတဲ့ ကဗျာကိုပယ်ပါတယ်။ ကဗျာဆိုတာ ကာရန်မရှိရင် ကဗျာ မတွင်ပါဘူးဟု ရေးပြီး ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဝေဖန်ထားပါတယ်၊ ဘယ်စာအုပ်မဆို ကာရန်အပြည့်နဲ့ ကဗျာသာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဂျေက အဲဒီအဆိုကို ရင်ထဲစွဲနေပါတယ်။ မြန်မာဖတ်စာ မှာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ဦးပုည ဦးဇော်ဂျီ ဦးမင်းသုဝဏ် ဦးတင်မိုးတို့ ရေးခဲ့တာ ကာရန်နဲ့နုနုရွရွကဗျာ လေးတွေပါ၊ ရွှေစွန်ညို ၀ါဆိုဝါခေါင် ကဗျာလေးတွေဟာ တသက်မမေ့နိုင်တဲ့ ၄တန်းမြန်မာစာဖတ်စာအုပ်ထဲက ကဗျာလေးတွေပါ။ ဘော်ဒါတွေ ဖတ်စာအုပ်ပိတ်ပြီး အော်ဟစ်ရွတ်ဆိုခဲ့တာ ပြန်စဉ်းစားရင် မနေ့ တနေ့ ကလိုခံစားရပါတယ်။ အခု ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ကာရန်ကဗျာကို တွေ့ ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းတယ် ပြောမလား ခေတ်နှောင်းတယ် ဆိုမလား အရိုးစွဲနေတဲ့ ကာရန်ရှိတဲ့ ကဗျာ ကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်မိ ရေးမိ ဖွဲ့ မိပါတယ်။
ဆီမီးတွေလင်းပါတဲ့ မနှင်းတို့ အိမ်
၀ါဆိုဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့ 
အုန်းလက်နွားလေး ထားခဲ့မယ် သွားမယ် သွားမယ်
ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ဝဲပါတယ်
မထွေးလို လို့ဝဲပါတယ်။
မထွေးမပါ တို့ ချည်းသာ
ပင်လယ်ရေ ဘယ်မခမ်း မထွေးအမိဖမ်း ဖမ်း ဖမ်း။
ညဉ့်နက် သန်းခေါင် မနေပေါင်။
ဘာနဲ့ သွားလဲ မရွှေဖဲ
ပြန်စဉ်းစားရင်း မောင်ရေခဲ မရွှေဖဲတောင် ကဗျာ အပြည့်မမှတ်မိတော့ဘူး၊ မှားရင်ပြင်ပေးကြပါ၊ ကျေးဇူးတင်လျက်
David Cooperfield လိုဘဲ Criss Angel က မျက်လှည့်ပညာ ကောင်းတာ တွေ့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေ က ကြည့်နိုင်မယ်တော့ မထင်ဘူး။ သူ့ မျက်လှည့် ဗီဒီယို အများကြီးထဲက ရှောက်သီးထဲ လီမွန်ထဲ့ လီမွန်ထဲ ကြက်ဥထဲ ကြက်ဥကို အကောင်ဖောက်ပုံ၊ တိုက် အမြင့် တခုပေါ်က နေ နောက် တိုက် အမြင့်ပေါ် ဈာန်နဲ့ သွားပုံ၊ မိန်းခလေး တဦးကို သူ့ ကိုယ်ထဲမှ ဖောက်ထွက်လာစေပုံ၊ ရေကူးကန်ရဲ့ ရေပြင်ပေါ်မှာ ဈာန်နဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (ဒီည ၁၂နာရီမှာ လန့်နိုးလာလို့သူ့ မျက်လှည့်တွေ ကြည့်နေတာ မနက် ၃နာရီ အထိဘဲ ဒီ၎ခုကိုတော့ သဘောကျလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ ဗီဒီယိုတွေ အတော်များပါတယ်။ အားလုံးကြည့်ချင်စိတ်မရှိတော့လို့ကြည့်သမျှထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာဘဲ ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ အခု ပြန်အိပ်လိုက်ပါအုန်းမယ် ။။။ ခေါ ခလော ခေါ ခေါ ခလော..)
ဒေးဗဒ်ကော်ပါဖီးရဲ့ မျက်လှည့်ပညာ ကို တွေ့ ဘူးကြမှာပေ့ါ။ အခု လက်တွေ့ ကျကျ အတော်ဆုံး မျက်လှည့်ပညာရှင်တဦး အကြောင်း အီးမေးလ်ထဲ ရောက်လာလို့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ....
ညီမငယ်တဦးက ဂျေက ကဗျာ မခံစားတတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်၊ ထင်ကြစရာဘဲလေ။ အချိန်အခါသင့် အခွင့်သင့်ရင် ကဗျာ ခံစားတတ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ဖီလင်မလာတဲ့ အတွက် ကိုယ်ပိုင် ကဗျာရေးချင်စိတ် မရှိပါဘူး။
သို့ သော် ဘလော့ကာခရီးထွက်တုန်း ဖတ်ရတဲ့ ကဗျာတွေ ကို Version ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုထိ ဘလော့ကာ ၃ဦးအတွက် ရေးပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ မူရင်းရေးထားတဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ပြီး Version ပုံစံပြင်ရေးတာ မိုလို့ နဂိုကဗျာရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို စာသားပြောင်းရေးတဲ့အတွက် လက်တန်းပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာအဖွင့်တွေ ကိုယ်ထည်တွေ စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့ အတွက် ရေးသားချိန် ၁၅မိနစ်- ၂၅မိနစ်သာ ကြာပါတယ်။ ရေးချင်စိတ်ရှိနေသဖြင့် ထိုသို့ မြန်ခြင်းဖြစ်သလို ကဗျာမှာ လည်း အလွန်ရသ မမြောက်တာ ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်တာ ၀န်ခံပါတယ်။ သို့ သော် ထပ်ပြီး ခေါင်းခြောက်မခံချင်တော့သဖြင့် ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။
ကိုချစ်ဦးဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဖူးစာကဗျာလေးကို Version ပြောင်းထားခြင်း
ကိုတောသားဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို Version ပြောင်းထားခြင်း
ကိုဆင်ခရို ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို Version ပြောင်းထားခြင်း
"ဆင်ခရိုတံဆိပ် ကိုယ်ရံတော် ဓါတ်ဘူးလေး"
ထပ်ခြပ်မကွာ နောက်တော်ပါး မှ
နှတ်ဖွင့် မလို မျက်ရွဲပင့်ထို
ဘ၀အိမ်မက် လှစေဖို့ တွက်
ထီးတော်ကိုမိုး ပန်းတော်တိုး လို့ 
မျက်လုံးပြူးကျယ် ဘီလူးဖြစ်လဲ(အဲ မှားသွားလို့ )
ညစောင့် ဒရ၀မ် (မှားပြန်ပြီ)
မင်းတွက်ဆိုရင် ဘ၀ ဖြန့် ခင်း
ကိုယ့်ဧရိပ်မယ် နားလှဲ့ ထိပ်ထား
တဖ၀ါး မခွာကိုယ်ပါ ယုံပါကွယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှ လုပ်ချင်စိတ် ရေးချင်စိတ်မရှိလို့ပို့ အဟောင်းဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်
ဓါတ်ဆီဈေး မတရား ထိုးတက်မှု့ ကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသည် ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်ခေတ်ဖြစ်သော ကျောက်မီးသွေး ရာစုနစ်သို့ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာမည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ မီးသွေးမှ မလိုအပ်သော မီးခိုးများ ရေနွေးငွေ့ မှ ရေငွေ့ များ ကိုတတ်နိုင်သမျှ မပြန့်လွှင့်ရန် သို့မဟုတ် မီးခိုး၊ရေနွေးငွေ့ များမထွက်ရန် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီနည်းများ ကြံဆနေကြောင်း။ ထို့ အပြင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရုံးများ မတရား အမြတ်ပေါ်မှု့ ကြောင့် ဓါတ်ကားများအတွက် တီထွင်မှု ရပ်ဆိုင်းဘွယ်ရှိကြောင်း အေဂျင်ဆီမှ မှန်းဆလိုက်ပါကြောင်း၊ (ထင်ရပါကြောင်း) အာရပ်နိုင်ငံ၊ အာဖရိကနိုင်ငံ၊ မြန်နာနိုင်ငံ(မမာနိုင်တော့ဘူး) တို့ မှ ဓါတ်ဆီဈေးနှုန်းများ ကို လစ်လျှူရှုရန် ကြိုးစားနေပါကြောင်း (ထင်ရပါကြောင်း)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ အသက်၄၉နစ်အရွယ် Mrs Stead ဆိုသူသည် သူမမွေးနေ့ နံနက်တွင် လ္ဘက်ရည်သောက် မုန့် စားနေစဉ်တွင် ဘီစကစ်ထဲမှ အရာတခုကို ကိုက်မိရာ ထွေးထုတ်ကြည့်လိုက်သော အခါ စိန်လုံးတလုံး ထွက်ကျလာသည်ကို တွေ့ ရသည်။
အမှန်တော့ ဒီအဖြစ်အပျက်က မကောင်းပါဘူး။
ထိုအကြောင်းအရာအတွက် မုန့် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္မဏီမှ တောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သည့် ကျောက်အမျိုးအစားနှင့် အစားအသောက်တွင် မသန့် ရှင်းသည့် အရာ ပါလာသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါကြောင်းသိရပါသည်။
ဒီတခါ သူ့ အလှည့်ကျလာ တာကတော့ လေကား
ထုံးစံအတိုင်း အသေးစိတ်သိလိုသူများ မေးလ်လိပ်စာပေးမေးပါက သတင်းကို ပို့ပေးပါမည်။
(လိပ်တက် ယုန်တက် ကြောင်တက်)
တရားထိုင်ပါက ရောဂါ အတော်များများ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတယ် ဆိုတာ လူအများ လက်တွေ့အကျိုးခံစား သိနေ ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တချို့တရားထိုင် နေကြ ပါတယ်။ လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူး တခု ပြောရရင်ဖြင့်...
ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမား တဦးဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျင်းထဲရောက်နေစဉ် အရှင်လတ်လတ် မြေမြုပ်သလို မြေဖုံးအုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၅မိနစ်အတွင်းမှာ လေမလုံလောက်မှု့ ကြောင့် သေဆုံးနိုင်သော်လည်း မြေကြီးအတွင်းထဲမှာ တရားမှတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် သွေးလေ လှုပ်ရှားမှု့ ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်ကယ်သူများအနေဖြင့် သူ့ အား မြေကြီးထဲမှ တူးဖော်ကယ်ယူရန် ၂နာရီခန့် ကြာမြင့်ပါတယ်။ တရားမှတ်ခြင်းအကျိုးကြောင့် လေမရှိသော မြေကြီးထဲတွင် ၂နာရီအထိ အသက်ရှင် နေသည်ကို တွေ့ ရပါမယ်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက subject - Meditation ဟုရေးပြီး စာရေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်က ပေါင် ၄သန်း တန်တဲ့ အိမ်..
Notice: Please request me for detail information. Subject - floathouse
သတင်းကောင်းတခုကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်များက တီဘီရောဂါ အမြစ်ဖြတ်နိုင်မဲ့ နည်းပညာ (ဆေးပညာ) ကို ၅နစ်အတွင်း အကောင်ထည် ဖော်နိုင်မည် ဟု ကြားသိရပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုသူများ မှတ်ချက်တွင် email address, Name, blog name(optional), subject-health TB ဟု ပေးပို့ ပါက သတင်း အသေးစိတ်ကို ပေးပို့ ပေးပါမည်။
ဟီးဟီး ဘလော့ကာတွေက အထင်ကြီးနေတာ။ ကားတွေ ကားတွေ အသစ်တွေချည့်ဘဲ။ အင်္ဂလန်က လူတွေ တောင် မစီးဘူးကြ သေးဘူး။ ဒီဇိုင်းအသစ်တွေ ထွင်တာ စမ်းသပ်အောင်မြင်ရင် သတင်းစာထဲ ထဲ့ကြော်ငြာ တာကို မ လာ သို လာ ပြီး ဒီကားရှိုးရွန်း မှာ တင်ပြထားတာ။ ဈေးကွက်တောင် မရောက်သေးဘူး။ အသေးစိတ် အကြောင်းစုံ သိချင်ရင် မေးလ်ပို့ ပြီးမေး ပြောပြမယ်..
(အဟီ်း အနော်လည်းမ၀ယ်နိုင်လို့ ကြော်ငြာ ပွဲချား လုပ်နေတာ)
ကားများ ထပ်ဝင်လာ နိုင်သည်။ လာငမ်းနိုင်သည်။ အခုလဲ ကားရှိုးရွန်း လုပ်နေတာ ဇီးသီး(Series) က ဆက်အုန်းမှာ ... ဆက်ရ်ျမျှော်ပါ...
နောက်ဆုံးပေါ် လိပ်တက် ယုန်တက် မော်ဒယ်တက် ကားရှိုးရွန်း
အာရပ်နိုင်ငံ အာဖရိကနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ထောင်ကြွလွန်းသော ဓါတ်ဆီဈေးအတွက် အံတုရန် ဓါတ်ကား
အသေးစိတ်သိလိုသူများ စာရေးဆက်သွယ် ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ခွက်စုတ်လေးနဲ့ပက်တာ လောက်တော့ ........ ရေ တာ ပေ့ါ .... ရေ တာပေ့ါ
ဗြဟ္မာမင်း သိကြားမင်းတို့ထိုင်တဲ့ ကျောက်ဖျာ လည်း ဓါတ်ဆီဈေးက မိုးပေါ် တက် ဆောင့်ထိုး နေလို့ကွဲအက်နေပြီ။ အခုလာပြီ တန်ခူးမှာ သိကြားမင်း အတွက် စီးတော်ယာဉ် သင်္ကြန်ကား.... ရေနဲ့မောင်းလို့ ရတဲ့ ကား ရေကား လာပြီ..
အသေးစိတ်သိလိုသူ များ joyful4all2008@gmail.com, Subject: Water Car ဟု မေးလ်ပို့တောင်းခံ နိုင်ပါသည်။ မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည် ဘလော့ကာအမည် ကို ဖော်ပြပါက သတင်း အသေးစိတ် ကို မေးလ်ဖြင့် ပို့ပေးပါမည်။
at 6:05 AM6comments
ချိုနွယ်ဦးက မုန့် ကျွေးရမယ် ဆိုတော့ မတင်ဖြစ်တဲ့ ပို့လေး တင်ဖြစ် သွားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အစားမရှောင် ခင် နောက်ဆုံးနေ့ အနေနဲ့ပုစွန်ခွက်ကြော် ကြော်စားခဲ့ သေးတယ်။ ကိုအဲန်ဒီဆီက နည်းလေးဖတ်ပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ပုစွန်ဆိတ်လေးကြော်ဖို့ စဉ်းစားတယ်။ သူငယ်ချင်းကို မတွေ့ ရတာ ကြာတော့ ဖိတ်ထားတာနဲ့စားစရာ အဆန်းလေး ကျွေးဖြစ် သွားတယ်။
ပထမကိုအဲန်ဒီရဲ့ နည်းအတိုင်း အမှုန့် ဖျော်တာဘဲ အရည်ကျဲတော့ ကြော်လိုက်တဲ့ အခါ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါနဲ့ပစ်သွားအောင် ရောရင်းနဲ့စားကောင်း သွားတာဘဲ။
၁. တန်ပူရာ မှုန့်(ကြော်ပြီးခါစတွင် ပွကာ ကြွပ်ကြွသော်လည်း အေးလျှင် ပျော့သွားသည်။)
၂. ကောက်ညှင်းမှုန့်(ကြော်ရာတွင် ပွစေသည်။)
၃. ဆန်မှုန့်(အကြော်အေးလျှင် မာစေသဖြင့် စားကောင်းသည်။ မပွပါက ဂျပ်ခဲဖြစ်နိုင်သဖြင့် တခြားအမှုန့် ရောသင့်သည်)
၄. ပဲမှုန့် (အကြော် ချိုစေသော်လည်း အကြော်မကျွပ်ကြွပါ။)
၆. အချိုမှုန့်(မကြိုက်လျှင် မထဲ့ပါနှင့် ပဲမှုန့် က ချိုစေပါသည်။)
၁၊၂၊၃၊၄ အားလုံးကို ဆတူရောပါသည်။ ကောက်ညှင်းမှုန့် ကိုအားလုံးထက် တ၀က်သာထဲ့ပါသည်။ မုန့် နစ်ရည်မှာ့ ပစ်ပစ်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့ မှသာ ပဲပင်ပေါက်နှင့် ရောနယ်ရာတွင် မုန့် နစ်များ ပဲပင်ပေါက်တွင် ကပ်နိုင်ပါသည်။ ဆီထဲ ထဲ့သောအခါ ပစ်သဖြင့် မုန့်နစ်သားများ အောက်ဘက်သို့ကျမသွားသဖြင့် စားကောင်းသလို အကြော်လှ ပါသည်။
ပုဂံပြားထဲတွင် ပဲပင်ပေါက် လက်တဆုပ်ထဲ့၊ မုန့် နစ်ရည် ၄ဇွန်းထဲ့ နယ်ကာ ဆီအိုးထဲတွင် ပြားပြား ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ဖြစ်အောင် ဖြန့် ထဲ့ပါသည်။ မုန့် နစ် ပျစ်သဖြင့် လက်ဖြင့် လိုသလို ပုံဖော်နိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ပုစွန်ကို မုန့် နစ်ရည်ထဲ ထဲ့ကာ ပဲပင်ပေါက် အပေါ်တွင် တင်လိုက်ပါသည်။
မုန့် နစ်သည် ပုလင်းထဲမှ ငရုတ်ဆီလို ပစ်ပစ်ခဲခဲ ဖြစ်သင့်သည်။ ပဲပင်ပေါက်တွင်ကပ်နေသလို လိုသလို ပုံဖော်နိုင်သည်။ ပုစွန်ကို မုန့်နစ်တွင်နစ်ပြီး ပဲပင်ပေါက်ပေါ်တင်ရာတွင် လည်း မုန့်သားကပ်သဖြင့် ကြွပ်ပါသည်။
အမေများနေ့ လို့ ခေါ်တဲ့ မတ်လ ၂ရက် ကို ရောက်ပြီ။
ပြောရရင် မာမီတို့ နေ့အမေတို့ နေ့လို့ ပြောရမှာဘဲ စာရေးသူက ကြီးတော်ဘကြီး က ပြန်မွေးစားထားတော့ မိဘ၄ပါးရှိနေတော့ မိခင်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုမွေးတဲ့ အမေထက် မွေးစားအမေ အကြောင်း ဘဲ ရှိပါတယ်။
စာရေးသူက ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကို ပြန်သတိရလို့ ပြောရရင်ဖြင့်
အူဝဲလို့ အော်ငိုတဲ့ တလဆေးရုံးဆင်းပြီဆိုကထဲက (မွေးတဲ့အမေ)မာမီက (သူ့ အမအိမ်)အမေ့အိမ်က နေတယ်။ နောက်ဆုံးအိမ် ပြန်တော့ အူဝဲကို အမလက်ထဲထားခဲ့ရတာ သနားစရာတေ့ာကောင်းသား။ မထားလို့ လဲ မဖြစ်။ ကလေးနဲ့ အမေက အသက်လုနေရတော့ အမကိုရောင်းစားခဲ့ရတယ် ဆန်တပြည် ငွေတမတ်နဲ့ ။ အရင် သီလရှင်ကြီးဆီရောင်းတာလဲ မရတော့။ အပြီးအပိုင်ရောင်းခဲ့ရပါရော။ ၂ဦးစလုံးအသက်ရှင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာကိုး။
ကလေး ကိုချီပြီး အတယ်က ရွာရိုးတလျောက် သားသည်အမေတွေဆီ ကလေးနို့ တိုက်ပေးဖို့တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် အလည်ထွက်ရတယ် ပြောရရင် အိမ်နီးချင်းတွေကို တောင် အမေခေါ်နိုင်တယ်။ တချက်စို့ ဘူး သူ့ ကျေးဇူးပေဘဲ။ စာရေးသူမှာ မိခင်တွေ ပေါမှပေါ (အခုစာရေးမှ သတိထားမိတာ ပြောတာ။)
ကလေးငိုလို့ ချော့သိပ်ရင် မေမေ့သီချင်းက ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်း တိန် တိန် တိန် .. တိန် တိန် တိန်... နဲ့အိပ်လို့ ကောင်းမှကောင်း၊ ကြောက်ရင် မေ့မေ့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းဖွက်ထားတယ်။ ငိုလို့ မေမေက ချီပြီး တိတ်တိတ်မငိုနဲ့ နော် လို့ ပြောရင် မျက်ရည်တွေ မေ့မေ့ ပုခုံးပေါ်သုတ်လိုက်တယ်။ (ကျလာတဲ့ နှပ်တွေရော အဟင်း... ၂ခါ၃ခါသုတ်လိုက်တော့ မျက်ရည်ရော နှပ်တွေရော မျက်နှာမှာ အပြည့်ဖြစ်မယ် လို့ အခုမှ စာရေးရင်း တွေးမိတယ် ငါ့နယ်နှော်)
ထိုင်နေရင်း မျက်နာသစ်ပြီးသား။ င်္အကျီလဲပြီးသား။ ပေါင်ပေါင် အဖွေးသား။ ပါးစပ်ဟရုံနဲ့ ဗိုက်ပြည့်ပြီးသားဘဲ။ အမေ့ခွံ့ သမျှ မြိုချတယ်။ သူများခွံ့ ရင် ဘာရမလဲ ဖူး ဆိုပြီး ခွံ့ တဲ့သူမျက်နှာတော့ အဖွေးသားဘဲ ဒန့် ဒန့် ဒန့် 
မနက်မိုးလင်းရင် မျက်လုံးအရင်မဖွင့်သေးဘဲ ဘေးကို လက်နဲ့ စမ်းရတယ်။ အမေ့မတွေ့ ရင် အာပြဲကြီးနဲ့အမေရေ... လို့ အော်ပြီ အမေ မလာမချင်းမရပ်ဘူး။ ပဲပြုတ်သည်တောင် လန့် သွားရမယ် ငှဲငှဲ
အမေက ဂျေ့ လက်ကို ကိုင်ရင် ဖွဖွလေးကိုင်တာ။ ဘယ်တော့မှ မရိုက်ဘူးဘူး အဲတသက်နဲ့ တကိုယ် အမေရိုက်တာ တချက်ဘဲ ရှိတယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး ရုရှားပြန် နွဲ့ နွဲ့ စမ်းလာမယ်ဆိုတာ အောက်ဆင်းဆော့လို့ ချော်လဲ နဖူး ၂ဖုထွက်တော့ အမေစိတ်တိုတာ။ သစ်သားခွေးခြေလေးပေါ်ထိုင်ရင်း ၀ါးခြမ်းပြားလေးနဲ့ ခြေသလုံး တုတ်တုတ်လေးကို တချက်.... နာပါဘူး။ အမေ့ကြောက်လို့ ငိုတောင် မငိုရဲဘူး။
ငယ်ငယ်ထဲက တိုက်ကွမ်ဒိုချန်ပီယံ။ စောင်ဆိုရင် ခနခန အကန်ခံရတယ်။ အမေဆို ညည ၁၀ခါမက ဘူး စောင်ထထ ခြုံပေးရတာ။ ခုမှ သနားမိတယ်။
အမေထဲ့ပေးတဲ့ နေ့ စဉ်ထမင်းဘူးကို ကြည့်ပြီး (တက္ကသိုလ်က)သူငယ်ချင်းတွေ က ပြောတယ် ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာ ကျနေတာဘဲတဲ့။ ငါးဆို နွင်ပြီးသား။ ကြက်သားအရိုးမမြင်ဘူးဘူး။ ဒန့် ဒလွန်ဆိုတာ အကြည်ရောင်အဖတ် ရှည်လမျှောလေး (အသားနွာပြီးသား)။ လိမ္မော်သီး ဆိုရင် လိမ္မော်ရောင် အရည်ဖုလေးတွေဘဲ တွေ့ ဘူးတာ။ လိမ္မော်သီးအမြှေးပါး မစားတတ်တာ ခုထိဘဲ။
ကဲ ဒီအထိဘဲ ရေးချင်တယ် ထပ်ရေးရင် စိတ်မကောင်းစရာတွေ ပါလာမှာစိုးလို့ 
မာမီအကြောင်းဆက်မယ် ... အမေက ငါ့ကလေးကို ၀အောင်ကျွေးနော် ဂရုစိုက်နော် လို့အိမ်ပေါ်ကနေ ကားထဲ ၀င်တဲ့ထိ တဖွဖွ မှာတယ်။ မာမီက အမကလေးကို ကျမမွေးတာ မပူပါနဲ့ ဂရုစိုက်ပါမယ် ဆိုပြီး အာမဘန္ဒေ ခံပြီးခေါ်လာရတယ် ။ တနေကုန် အမတွေ အကိုတွေနဲ့ ဆော့ပြီး ညအိပ်ရင် မေမေ့လို အနားမှာ ဖက်သိပ်မဲ့သူမရှိတော့ ၀မ်းနဲလိုက်တာ။ မေ့မေ့ရင်ခွင်ကိုလွမ်းတယ်။ ဗြဲ အမေ့အိမ် ကျန်ပို့ပေး.... တညလုံးဘဲ ဒါနဲ့ဒယ်ဒီက အငိုမတိတ်ဘူးလား စာအုပ်ကြီးနဲ့ ကိုင်ပေါက်မယ် ပြောတော့။ စာအုပ်ကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုသတ္တ၀ါပါလိမ့်။ ဆက်ငိုလည်း ပုခုံးပေါ်တင်ချော့မဲ့ အမေလဲ မရှိ။ ညဘက် တယောက်ထဲအိပ်ရမှာ။ ၀မ်းနဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြိတ်ငိုရတယ်။ အမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ်လို့ခဲထားတယ်။
မာမီက သူ့ အမစကားနားထောင်ပါတယ် ကျွေးပြီးတိုင်း ဗိုက်လှန်ပြရတယ်။ ဗိုက်ကလေး ပူတင်းမှ စိတ်အေးတယ်။ မကောင်းဘူး အမေဆို မစမ်းဘဲနဲ့ သိတယ်။ သူမသိရှာဘူး။ ဗိုက်အစမ်းခံရတာ နာတယ်။ အမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ် ဟင်း
အမေမသိအောင် မာမီက ဟင်းတွေ အတင်းကျွေးတယ်။ မစားဘူးဆို မစားဘူး ပါးစပ်အတင်းစေ့ထားတယ်။ မာမီက နှားခေါင်းပိတ်တော့ ပါးစပ်ဟလာတာနဲ့ အတင်းခွံ့ တယ်။ ဘာရမလဲ လျှာနဲ့ အတင်းတွန်းထုတ်တာပေ့ါ။ မာမီသွေးပါတယ်လေ ခေါင်းမာတာ.. လျှာနဲ့ အတင်းတွန်းထုတ်တော့ အစာရဲ့အရသာကို လျှာ က စမ်းမိရော။ ဒါနဲ့ အသာလေး မြိုချလိုက်တယ်။ မာမီကတော့ ကြွားတယ် အမကလေး ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ စားတယ် ဆိုတော့ အမေ ရင်ဖိရော။
အဲ မကြိုက်လို့ ရှိရင် အတင်းခွံ့ တဲ့ မာမီ့လက်ကို ကိုက်လိုက်ရော အတင်းကျွေးတယ်လို့အမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ်
မမတို့ ကျောင်းကပြန်လာရင် စားစရာတွေ ပါပါလာတယ်။ မှတ်မိတယ် ပေတံလေး။ မမက ချိုးပြီး ပါးစပ်ထဲခွံ့ ပေးတယ်။ သကြားချောင်းကို ပေတံလို လုပ်ထားတာ။ ဒါနဲ့ နောက်တခု ကောက်ဝါးလိုက်တယ် မာမာကြီး။ သူတို့ က ခဲဖျက်ပုံစံ သကြားချောင်းမလုပ်တာ ဆိုးတာဘဲ။ မမလတ်က ကျွေးတော့ သူမသိအောင် မှားဝါးလဲ အမေနဲ့ မတိုင်ပြောဘူး။
မမကြီးကတော့ ဂျေကို ၀လို့ ခနခန လက်မောင်းဆွဲလိမ်တယ် ကိုက်တယ်။ သူ့ ဆိုသိပ်မုန်းတာဘဲ။ လက်မှာ နီရဲပြီး လိမ်ထားတဲ့ အရာကြီးသွေးချေဥတာ ၂ရက်တောင်။ တခါ သူကိုက်တာ သွေးတောင်ထွက်တယ်။ အမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ်။
မမလေးကတော့ ဂျေအချစ်တုံးမမ သူဘဲ သီချင်းဆိုသိပ်တယ် ထမင်းခွံ့ တယ်။ အိပ်မယ်ဆိုရင် ချစ်သောမောင်မောင် ဆိုတဲ့ ချိုပြုံးသီချင်း မှ ဂျေက အိပ်တယ်။ ၀င်းဦးရဲ့ သီချင်းတွေကို မအိပ်တဲ့ အချိန် သူ့ ပေါင်ပေါ်ထိုင်ရင် နားထောင်တယ်။ သနားပါတယ် ဂျေက ၀တော့ သူခမျာ အကြာကြီး ချီမထားနိုင်ဘူး
မမငယ်ကျတော့ ဂျေနဲ့ အရွယ်တူတယ် သူ က ပိန်ပိန်သေးသေးလေး။ ဟီးဟီး သူ့ ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ရင် သူခမျှာ တအီးအီးနဲ့ အော်နေရတယ်။ ဟောဒီမှာ မာမီရေ ကျနော်အပေါ်ဂျေ တက်ဖိနေတယ် လို့ အော်ရော အမတွေ က ဂျေကို ပွေ့ ချီသွားမှ သူ့ ခမျှာ အအော်ရပ်ပြီး လှုပ်ရှားနိုင်တာ။ သူ က ခနခန အိပ်ယာပေါ်မှောက်အိပ်တတ်တယ်။ သူ အိပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဂျေက ချစ်လို့ အမကိုယ်ကို မွေ့ ယာသဘောထားပေးပြီး အိပ်ပေးတဲ့ ဟာကို။ ဂျေကို မ ပြီး ပွေ့ ချီရတာ မလွယ်ဘူး။ ဂျေ့ ခြေထောက်က ပင့်ကူသိုင်းကွက်နဲ့ 
အမေများနေ့ မှာ မွေးမေ ကျွေးမေ နဲ့တခါစို့ဘူးအိမ်နီးချင်းအမေများနဲ့အမေလို ပြုစုခဲ့သော အမများကို ဂုဏ်ပြုပြီး ဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်။